Olee otú ọgụgụ isi si enyere aka azụmahịa | Martech Zone
Olee otu ọgụgụ isi si enyere ndị ọchụnta ego aka
Wenezdee, Machị 27, 2019 Wenezdee, Machị 27, 2019 Onyebuchi Patel
Amamịghe echiche na-enwu gbaa na ụlọ ọrụ ngwanrọ na ike ya. Ndị ụlọ ọrụ na-enweta ikike ọgụgụ isi dị ka ọ na-aga n'ihu na-eto ma na-agbanwe. N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị anụla ọtụtụ akụkọ banyere ihe ịga nke ọma gbasara ọgụgụ isi. Site na arụmọrụ arụmọrụ Amazon ka GE na-edebe akụrụngwa ya na-agba ọsọ, ọgụgụ isi arụpụtala.
N'ụwa nke oge a, ọ bụghị naanị nnukwu ụlọ ọrụ kamakwa obere ụlọ ọrụ na-etolite. Amamịghe echiche nwere ngwaọrụ dị iche iche nke nwere ike inyere ụlọ ọrụ pere mpe na nke etiti aka iji meziwanye nrụpụta na arụmọrụ ha.
Wzọ 5 ọgụgụ isi nwere ike inyere azụmahịa gị aka
Enyemaka site na onye enyemaka nyocha olu - Onye nyocha olu na-enyere gị aka nwere ike inyere gị aka oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Onye enyemaka a maara nke ọma olu olu bụ Siri nke na-abịa na kọmputa na ngwaọrụ IOS. Enwekwara ndị enyemaka na-achọ olu ọzọ dị ka onye enyemaka Google na Bixby, nke na-abịa ọhụụ na ngwaọrụ Samsung. Site na iji ọgụgụ isi, ndị na-enyere aka nyocha olu nwere ike inye aka nye ha ozi ha chọrọ. AI nwekwara ike iji ya dị ka ngwa ọrụ iji nyere aka wepụ ibu ahụ na mmadụ. Ihe ngwọta ndị a ma ama bụ Google, Microsoft, Amazon, na Mkparịta ụka.
Ikpebi ahia kwesiri - Iji ghọta nkewa ndị ahịa, Enwere ike iji ọgụgụ isi mee ihe dị ka ngwá ọrụ iji chọpụta ngwaahịa kwesịrị ekwesị-ahịa. Enwere ike ịme nke a site na ịpịpụta ikike nke igwe iji ghọta nkewa nke onye na-azụ ahịa. Tù ọ bụla na-azụ ahịa nwere ike iji ọgụgụ isi chepụta ma chịkọta nchịkọta ahịa ngwa ngwa. Site n'iji ọgụgụ isi, òtù nwere ike na-enwu na mgbasa ozi ma ọdịbendị ọdịnala na ịntanetị. Amamịghe echiche na-enye nghọta azụmaahịa ọ bụla maka ịtụkwasị ndị ahịa ha obi. Otu onye na-enye ọrụ na-elekwasị anya na nkewa ndị ahịa na-eji AI bụ Lexer.
Ọgbọ nke ndị ọrụ mmepe aka - Ọ bụghị azụmaahịa niile ga-enwe ike ịkpọ onye ọrụ gọọmentị. Ulo oru di otua nwere ike iji ọgụgụ isi mee ihe iji nyochaa ntinye aka na mkpa ndi oru. Amamịghe echiche na-achịkọta nzaghachi nke arụmọrụ onye ọrụ. Enwere ike ịkekọrịta nchegbu onye ọrụ ọ bụla yana nzaghachi ya site na iji ngwaọrụ ọgụgụ isi. Ọ bụ ọrụ nke onye mbido na onye nwe azụmaahịa, ịgbanye vibes dị mma n'ebe ọrụ ka ha wee nwee ike ịkwado na ndị otu ha nwere ike ịghọta nzaghachi na nchegbu. Otu ihe atụ bụ AmplifAI Ngwọta.
Vingkwalite ọrụ ndị ahịa - Iji melite nkwado ndị ahịa na ọrụ ndị ahịa nke nzukọ azụmaahịa, ọgụgụ isi nwere ike inye aka na-enyere ndị ọrụ aka. Enwere ike iji ọgụgụ isi mee ihe na ịhazi tiketi ndị ahịa, ịza ajụjụ ha na ntanetị wdg Ngwaọrụ nwekwara ike inyere obere azụmaahịa aka iji nyefee ọrụ n'ụzọ dị irè karị. Site n'iji ngwá ọrụ AI, a ga-enwe mmụba na afọ ojuju ndị ahịa na itinye aka.
Ojiji nke ihe ngwọta dị njikere - Artificial Intelligence ngwaọrụ nwere ike machiini na streamline ọtụtụ nsogbu na kwa ụbọchị aga-eme na ụlọ ọrụ oghere na nza nke nraranye. Ngwaọrụ AI na-arụ ọrụ dị iche iche dịka njikwa nkwukọrịta maka ịnye akụkọ azụmahịa. Nyiwe dabeere na ọgụgụ isi dabere na-enye ndị ahịa ikike ịchịkwa oghere mgbazinye ego nke azụmahịa. Ndị ahịa Einstein, IBM Watson Studio, Google Cloud AI, Azure Machine Mmụta Studio, na AWS Ngwa igwe ngwaọrụ na-eduga ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwaọrụ ọgụgụ isi niile dị n’elu nyere ndị azụmaahịa aka ịsọ mpi. Otu n'ime ọrụ kachasị arụ ọrụ site na iji AI bụ njikwa nke nkwurịta okwu kwa ụbọchị, ịchịkọta nchịkọta data, nzukọ usoro ihe omume na ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke ọgụgụ isi, obere na-ajụ-sized ulo oru na-rụọ ọrụ nke ọma ha arụmọrụ na anabata ke software software… ike mpi na nnukwu nnukwu òtù.
E nwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi melite ụkpụrụ azụmaahịa gị site na iji ọgụgụ isi, gụnyere:
Mee ka ahịa gị rịa elu site n’ire ahịa: Ngwá ọrụ nke ọgụgụ isi dabeere na ọgụgụ isi nwere ike inyere azụmahịa gị aka ịhazi ahịa kwa ụbọchị, ozi ndị ahịa na-ere ahịa, na-edozi nsogbu wdg. Ngwa AI na-abanye miri emi n'arịrịọ ndị ahịa na-arịọ iji nyefee ngwọta ka mma. A nwekwara ike iji AI na-atụ aro ndị ahịa gị ihe ndị ọzọ, site na inyocha ngwaahịa ndị ha jiri ma ọ bụ jiri ya. Nwere ike ịchọ ụzọ nke gị ahịa nwere ike kachasị na ịghọta gị asọmpi. Ngwa AI na-enyere aka ịhazi ndị ahịa gị ma rụọ ọrụ maka njikwa ezigbo ọkọnọ.
Mee ka nhazi ntinye ntinye di mfe:Ngwa AI nwere ike inyere aka azụmaahịa jikwaa ngwa ahịa ha nke ọma. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji bulie agbụ na iji megharịa ndozi. Ngwa ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi ga-enyere gị aka ịmepụta akpaaka njikwa gị ma mezuo usoro azụmahịa gị.
Imezi ngwa na mmezi:AI nwere ike inyere azụmahịa gị aka melite usoro mmezi ya, ọkachasị na ngalaba njem na nrụpụta. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-eji teknụzụ ọgụgụ isi maka iduzi nlele ndozi. Uwe na akwa nke akụkụ igwe na ụlọ ọrụ ụgbọ elu nwere ike iji ngwa AI. Ngwa ndị a nwere ike inyere gị aka ịmepụta usoro mmezi maka njikarịcha ka mma. Nke a mechara zere igbu oge na-achọ bụ ịnyefe ozi na nyocha.
Mgbochi cybercrimes:Organizationslọ ọrụ achụmnta ego na-egbu oge dị ukwuu na-anwa ịchọta azụmahịa aghụghọ. Ebe ọ bụ na e nwere usoro dị na ọgụgụ isi, a ga-eji ngwaọrụ ndị a maka ịchọpụta iyi egwu cybersecurity. Site na iji ngwaọrụ AI, enwere ike ịbelata ọnụ ọgụgụ nke ụgha ụgha anyị na-enweta n'ihi na ha abụghị iwu dabere na ngwa.
Iji teknụzụ nke aka gị:Enwere otutu ulo oru nke kwesiri ibufe ngwa ahia na otutu. Ulo oru di otua dabere na usoro ihe omuma. Enwere ike iji sistemu AI maka njem n'ihi na ha ga - enyere ha aka belata ọnụ ahịa ha ma gosipụta ntụkwasị obi karịa ụgbọala ndị mmadụ na - anya. Enwere ike ịchekwa ụgwọ njem site na iji usoro ọgụgụ isi.
Hụọ ndị kachasị mma: Chọta ndị kachasị mma na ịgbazite ha maka azụmaahịa gị, bụ oge na-ewe ọrụ ahụ. Nke a bụ ihe kpatara na ọgụgụ isi nwere ikike ịnagide mmata. Site n'iji ngwa AI, ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ nwere ike ịme ajụjụ ọnụ dabere na usoro mmetụta uche nke akọwapụtara na mbụ. N'ime nke a, ọ ga - enyere azụmahịa gị aka ịhazi usoro mbanye ya.
Ime ezigbo mkpebi gbasara azụmahịa:Data ọ bụla abaghị uru ma ọ bụrụ na enyochaghị ya nke ọma. N'ihi na inweta a chọrọ mmepụta, mkpa ka ị na-amụta site na data nke dị. Nwere ike ịdabere kpamkpam na ọgụgụ isi ọgụgụ isi ngwa ka ọrụ gị dị mfe. AI nwere ike ịchọta usoro na usoro ndị a nwere ike iji rụọ ọrụ na ntanetị na teknụzụ nchekwa nke azụmahịa gị.
Yabụ, ndị a bụ ụzọ iji melite ụkpụrụ azụmaahịa gị site na iji ngwa ọgụgụ isi na ngwaọrụ. Site n'ime nke a, azụmahịa gị ga - ebuli maka uru dị mma ma nweta ọkwá dị mma n'ahịa.